people Nepal » एक दिनमा ३३ सय यात्रु कारबाहीमा : कति उठ्यो राजश्व ? एक दिनमा ३३ सय यात्रु कारबाहीमा : कति उठ्यो राजश्व ? – people Nepal
एक दिनमा ३३ सय यात्रु कारबाहीमा : कति उठ्यो राजश्व ?
जेठ १७, काठमाडौं – महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबारदेखि उपत्यकामा पैदल यात्रु सुरक्षा अभियान लागू गरेको छ । करिब डेढ महिना जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नियम लागू गरिएको पहिलो दिनमै साढे ३३ हजार पैदल यात्रु कारबाहीमा परेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबारदेखि पैदल यात्रु सुरक्षा अभियानको नियम लागू गरेको डिआइजी मिङमार लामाले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा जथाभावी सडक पार गर्ने ३३ सय ४८ पैदल यात्रु कारबाहीमा परेका छन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकालाई हर्न नषिेधित क्षेत्र बनाउन सफल भएपछि पैदल यात्रु सुरक्षा अभियानको नियम कार्यान्वयन गरेको हो । १ बैशाखदेखि उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसको १५ दिनपछि पैदल यात्रु सुरक्षा अभियान लागू गर्न सचेतना अभियान थालिएको थियो ।